Maty, naratra, simba voalaza fa namely an'i Haiti ny horohoron-tany lehibe
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Haiti Breaking News » Maty, naratra, simba voalaza fa namely an'i Haiti ny horohoron-tany lehibe
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Haiti Breaking News • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny ivontoerana fampitandremana tsunami amerikana dia namoaka fandrahonana tsunami, saingy nesorina tao anatin'ny adiny iray ny fandrahonana.
Horohoron-tany mahery nandrava an'i Haiti.
Ny tatitra tsy voamarina dia manondro fahafatesan'olona marobe sy ratra maro.
Navoaka ny fampitandremana tsunami, saingy nofoanana taoriana kelin'izay.
Horohoron-tany lehibe, mahery vaika noho ny horohoron-tany nandrava tamin'ny 2010, dia namely an'i Haiti ny sabotsy maraina lasa teo, ka niteraka fahavoazana lehibe tany amin'ny faritra atsimon'ny firenena Karaiba.
Ny US Geological Survey dia nametraka ny haavon'ny horohorontany 7.2, na “lehibe”. Ny ivon'ilay horohoron-tany dia 12km (7.5 miles) avaratra atsinanan'ny Saint-Louis-du-Sud, tanàna misy mponina maherin'ny 50,000.
Ny tatitra tsy voamarina dia manondro fahafatesan'olona marobe sy ratra maro. Nanambara ny USGS fa "maro ny olona maty ary mety hiparitaka ny loza" Haiti.
Betsaka ny fahasimbana notaterina tany Haiti, miaraka amin'ny sary avy ao an-tanàna akaiky an'i Jeremie mampiseho tranobe potika sy lalana feno korontam-bato.
Lahatsary avy amin'i Jeremie dia mampiseho vovoka matevina mameno ny arabe, satria rava trano rava.
Ny olona sasany nandefa lahatsoratra tao amin'ny media sosialy dia nitatitra fa nahatsapa ny horohorontany tany lavitra any Jamaika, sy ny Ivotoerana fampitandremana tsunami any Etazonia namoaka fandrahonana tsunami taoriana kelin'izay. Na izany aza, nipoaka ny fandrahonana tao anatin'ny adiny iray.
Ny horohoron-tany dia nitranga minitra vitsy taorian'ny horohoron-tany 6.9 tamin'ny tanjaky ny horohoron-tany tany amin'ny saikinosy Alaska. Saingy, tany amin'ny faritra somary vitsy mponina kokoa ny horohoron-tany tany Alaska, izay ambany lavitra ny mety ho fahavoazana.